हठात् छोट्टिएको जीवनका अन्तिम महिना रवीन्द्र अधिकारीका लागि प्रीतिकर रहेनन् । सार्वजनिक पदमा बसेर उनले गरेका कामबारे जति पनि प्रश्न उठाइए, तिनको उत्तर दिन नपाउँदै उनको देहान्त भयो । राम्रो सम्भावना बोकेका मानिने युवा नेताको मृत्युमा मानिसहरू शोकमग्न हुनु र लगत्तै उनको सन्त–चित्रण वा ‘हेगियोग्राफी’ मिडियामा आउनु पनि स्वाभाविकै हो ।
गंगामाया अधिकारीको दर्दनाक आत्मकथा न्यायको अवसान पढेपछि उद्वेलित भएर मैले टिप्पणी गरेंँ– के माओवादी द्वन्द्व राजनीतिक चरित्रको थियो ? थियो भने निर्दोष किशोरलाई मार्ने, तिनका बाबुआमालाई घरबाट खेद्ने, तिनलाई शरण दिनेहरूलाई धम्क्याउने र तिनका गोठका गाईभैंसीलाई भोकभोकै मार्नेसम्मका काम कसरी सम्भव भए ?
दृश्य १– डोल्पाको जुफाल विमानस्थलको गेट । एक स्थानीय महिला जम्जमाएर भित्र जान खोज्छिन्, गेटको प्रहरी उनलाई हुत्याएर बाहिर निकाल्छ । घम्साघम्सीपछि प्रहरी फेरि कर्कश स्वरमा दोहोर्‍याउँछ: पहिले बोर्डिङ पास लिएर आउनुस्, अनि बल्ल । महिला जवाफ फर्काउँछिन्, टिकटकै लागि भित्र गएर भेट्नू भन्या छन् ।